Princeton University - Ọmụmụ na USA. Education Abroad Magazine
tọrọ ntọala : 1746
Echefukwala discuss Princeton University
Princeton University bụ a onwe alụmdi na e hiwere na 1746.
Nkuzi ụgwọ na Princeton University na- $45,000 (Aprox.).
Princeton, nke anọ kasị ochie mahadum dị na United States, emi odude ke obodo dị jụụ nke Princeton, New Jersey. N'ime mgbidi nke ya akụkọ ihe mere ahihia aiviri-kpuchie campus, Princeton awade a ọnụ ọgụgụ nke ihe, eme na òtù. The Princeton tiger, òtù nke Ivy League, na-ọma mara ha anọgide ike madu na ndị inyom na Lacrosse ìgwè. Ụmụ akwụkwọ na-ebi ndụ na otu nke isii residential kọleji na-enye a residential obodo nakwa dị ka iri ọrụ ma nhọrọ isonyere otu n'ime ihe karịrị 10 eri klọb maka ha keobere ma agadi afọ. The eri klọb eje ozi dị ka na-elekọta mmadụ na iri òtù maka ụmụ akwụkwọ ndị sonyere ha. Princeton si unofficial motto, “Na mba Service na na Service of All Nations,” -agwa mahadum nkwa na-ọrụ obodo.
Princeton agụnye ukwuu họọrọ gụsịrị akwụkwọ na mmemme site na Woodrow Wilson School of Public na International Affairs na School of Engineering na Applied Sciences. One pụrụ iche akụkụ nke Princeton si agụmakwụkwọ mmemme na niile Undergraduate ụmụ akwụkwọ na-chọrọ dee a agadi tesis. Ọwọrọiso Alumni agụnye U.S. President Woodrow Wilson; John Forbes Nash, n'isiokwu na- 2001 film “A Mara mma Mind”; model / omee Brooke ọta; na mbụ Ne Michelle Obama. Dị ka Princeton akụkọ mgbe, ma ọ bụrụ na a na-amụrụ eche nche na campus site FitzRandolph Gate tupu ha gụchara akwụkwọ, o nwere ike a ga-bụrụ ọnụ mgbe gụọ akwụkwọ.
Princeton University bụ a vibrant obodo nke mfọn na mmụta na-anọchi mba ahụ ọrụ na òfùfè ala ndi mmadu. kwụrụ ụgwọ na 1746, Princeton nke anọ kasị ochie mahadum dị na United States. Princeton bụ otu nọọrọ onwe ha, coeducational, nondenominational alụmdi na-enye Undergraduate na gụsịrị akwụkwọ na-akụziri ke Humanities, -elekọta mmadụ na sayensị, Mmadụ sayensị na injinịa.
Dị ka a ma ama n'ụwa nile nnyocha mahadum, Princeton achọ iji nweta ọkwa kachasị nke dị iche na ọ chọpụtara na nnyefe nke ihe ọmụma na nghọta. N'otu oge ahụ, Princeton bụ pụrụ iche n'etiti nnyocha mahadum ya ntinye onwe Undergraduate ozizi.
taa, karịrị 1,100 ngalaba òtù ezikwa ihe dị ka 5,200 Undergraduate ụmụ akwụkwọ na 2,600 gụsịrị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ. The University si emesapụ aka enyemaka ego usoro ihe omume ana achi achi na nkà mmụta niile ọnọdụ akụ na ụba nwere ike imeli a Princeton mmụta.
Princeton University Ọganihu amụta site mfọn, research, na ozizi nke enweghị atụ àgwà, onye mesiri ike na Undergraduate na doctoral mmụta na-pụrụ iche n'etiti ụwa oké mahadum, na na-emetụta nke ukwuu nkwa na-eje ozi na mba na ụwa.
The University si akọwapụta e ji mara na ọchịchọ ndị na-agụnye:
a na-elekwasị anya na nkà na Humanities, na-elekọta mmadụ na sayensị, eke na sayensị, na injinịa, na ụwa-klas mma gafee niile nke ya ngalaba;
a nkwa na-kenkeputa, free ase, na nchọpụta nke ọhụrụ ihe ọmụma na echiche ọhụrụ, tinyere a nkwa iji chebe ma ebunye ndị nwere ọgụgụ isi ihe, nkà, na omenala nketa nke gara aga;
a ngalaba nke ụwa-klas ọkà mmụta bụ ndị na-arụ na na inweta ụmụ akwụkwọ na-ewepụtara na ndị ọma mwekota nke ezi ihe ma na research;
a na-elekwasị anya Undergraduate mmụta na bụ ihe pụrụ iche n'ihi na a isi nnyocha mahadum, na a usoro ihe omume nke na-emesapụ aka nkà na n'out oge akwadebe ụmụ akwụkwọ maka bara uru ndụ na ọrụ, sakwuo mbara ha echiche ha, na-enyere aka na-etolite ha odide na ụkpụrụ;
a gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ihe ọhụrụ na ya na mesiri ike na doctoral mmụta, mgbe na-achụ elu mma nke nna ukwu mmemme na họrọ ebe;
a ụmụ mmadụ ọnụ ọgụgụ na nurtures a siri ike echiche nke obodo, -agwa elu-etoju nke njikọ aka, ma na-akpali onye nkwurịta okwu;
ahụkebe na-amụrụ ihe enyemaka mmemme na Undergraduate na gụsịrị akwụkwọ larịị na hụ Princeton bụ ọnụ na-niile;
a nkwa na-anabatanụ, support, na-ekere òkè ụmụ akwụkwọ, ngalaba, na mkpara na a sara mbara elu ugwu nke nzụlite na ahụmahụ, and to encourage all members of the University community to learn from the robust expression of diverse perspectives;
na ewu ewu na immersive residential ahụmahụ on a campus na a pụrụ iche n'echiche nke ebe nke na-akwalite mmekọrịta, echiche, na na ndụ na-ekekọta;
a nkwa na-akwadebe ụmụ akwụkwọ maka ndụ nke ọrụ, Civic njikọ aka, na usoro ziri ezi na-edu ndú; na
ihe nke ukwuu aku na mmesapụ aka na-akwado Alumni obodo.
Chemical na Biological Engineering
French na Italian
music (music mejupụtara)
ndọrọ ndọrọ ọchịchị Economy
1826 James Madison, klas nke 1771 and former president of the United States, becomes the first president of the Alumni Association of the College of New Jersey.
1859 Alma mater “Old Nassau” written by Harlan Page Peck (klas nke 1862).
1883 Triangle Club (originally called the Princeton College Dramatic Association) tọrọ ntọala.
1902 Woodrow Wilson, klas nke 1879, elected 13th president.
1940 Undergraduate radio station (then WPRU, now WPRB) tọrọ ntọala.
1951 Forrestal Campus established on U.S. Route 1; “Project Matter-horn” research in nuclear fusion begins there. na 1961, its name is changed to the Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL).
1970 Council of the Princeton University Community (CPUC), a deliberative body of faculty, ụmụ akwụkwọ, staff and alumni, is established.
1971 Third World Center founded (na 2002, renamed the Carl A. Fields Center for Equality and Cultural Understanding, after an African American assistant dean of the college from 1968-71). Women’s Center founded.
1974 International Center (now the Davis International Center) tọrọ ntọala.
2010 Frick Chemistry Laboratory, the largest single academic building on campus excluding Firestone Library, emepe; Streicker Bridge opens, connecting the two sides of the science neighborhood across Washington Road.
2012 A five-year campaign, “Aspire: A Plan for Princeton,” concludes under President Shirley M. Tilghman, after raising $1.88 ijeri.
Ị chọrọ discuss Princeton University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Princeton University ukara Facebook